शत प्रतिशत सहकारीलाई बैंकमा आवद्ध गराउँछौं, केदारनाथ उप्रेतीको अन्तर्वार्ता - सहकारीखबर
२० माघ २०७४, शनिबार
Share : 2,118
सात प्रश्नमा केदारनाथ उप्रेती
प्रमुख, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, कास्की
कास्की जिल्लामा सञ्चालित सहकारीहरुको समग्र अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
अन्य जिल्लाहरुको तुलनामा कास्कीका सहकारी संस्थाहरु राम्रा र व्यवसायीक छन् । व्यवस्थित तबरले सञ्चालन भईरहेका छन् । सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र कानून अनुसार नै सञ्चालनमा छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक, कास्कीमा स्थापना भएपछि सहकारी संस्थालाई के फाइदा भएको छ ?
बैंक स्थापना भएपछि सहकारीलाई वित्तीय कारोबार गर्न सहज भएको छ । सहकारीलाई आवश्यक पर्ने पूँजीको अभावलाई पूर्ति गर्ने काम बैंकले गरेको छ । सहज र सस्तो दररेटमा बैंकले पूँजी प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थालाई परामर्श समेत दिदै आएको छ । व्यवसायीक काम गर्ने तयारीमा रहेका सहकारीलाई अवश्यक परामर्शसहित वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गरेका छौं । सहकारीलाई आवश्यक तालिम समेत प्रदान बैंकले गर्दै आएको छ ।
विशेष गरी बैंकले के कस्ता व्यवसायमा लगानी गर्दै आएको छ ?
बैंकले विविन्न किसिमका कर्जा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कृषि, पशुपालन सहकारीलाई सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अर्कोतर्फ लघुवित्तमार्फत विना धितोमा कर्जा पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । गत वर्ष मात्रै पाँच सहकारीलाई सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराएका थियौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको पूर्ण बैंकिङ सेवा हो ।
कति सहकारीले बैंकमार्फत कारोबार गर्दछन् ?
शहरमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी बैंकमा आवद्ध हुनुहुन्छ । ६ सय १५ सहकारी मध्ये ३ सय ५० सहकारीले कारोबार गर्दै आएको छ ।
काठमाडौंमा बसेर पनि काम गरेको अनुभव तपाईं सँग रहेको छ । पोखरा र काठमाडौंमा सञ्चालित सहकारीमा फरक के पाउनु भयो ?
काठमाडौंको तुलनामा पोखराका सहकारी व्यवस्थित पाएको छु । यहाँका सहकारी व्यवसायीक छन् । काठमाडौंमा लगानीहरु जोखिममा रहेका छन् । विना धितोमा बढी मात्रामा कारोबार गरिरहेका छन् । तर यस्तो अवस्था पोखरामा छैन ।
सदस्यहरुलाई सहकारीका बारेमा कत्तिको ज्ञान छ ?
विगतमा यस्तो समस्या अवश्य थियो । हाल सदस्यहरुले सहकारी बुझेका छन् तर प्रयाप्त भने छैन ।
सहकारी बैंक, कास्की शाखाको आगामी रणनीति के छन्?
कास्कीमा सञ्चालीत सम्पूर्ण सहकारीलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । हामी शत प्रतिशत सहकारीलाई बैंकमा आवद्ध गराउने हाम्रो योजना छ । सहकारीलाई आवश्यक पूँजी बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने हाम्रो योजना छ । कास्कीमा सञ्चालित सहकारी वित्तीय सेवाका लागि अन्य वित्तीय संस्था धाउनु नपर्ने वातावरण बनाउने हाम्रो योजना छ ।